Imamoglu wuxuu ku dhawaaqay natiijooyinka sahanka Kanal Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulImamoglu wuxuu ku dhawaaqay natiijooyinka sahanka Kanal Istanbul
26 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Kanaalka imamoglu wuxuu shaaciyey natiijada sahanka istanbul
Isagoo cadeeyay inay bilaabeen Qorshaha Dhaqdhaqaaqa Dhulgariirka, Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu yidhi, Waxaan furi doonnaa laba goobood oo dhul gariir balaaran ah iyo jardiinooyinka tababarka dhowaan. Imamoglu wuxuu sheegay in heerka kuwa ka soo horjeeda mashruucan uu ka badan yahay 2 boqolkiiba cilmi baarisyada la xiriira Kanal Istanbul Project.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istambul (IMM), wuxuu sii wadaa hirgelinta fikradaha "daah furnaanta" iyo "la xisaabtanka", oo laf dhabarta u ah ololaha doorashada. Isaga oo qabtay shir-jaraa'id 23-kii Diseembar, 2019, İmamoğlu wuxuu la wadaagay 23-dii bilood ee ugu horreeyay muddada fulinta ka dib Juun 6, wuxuuna la wadaagay dadweynaha shir-jaraa'id. Imamoglu, soo bandhigid la mid ah maalintaas, gudoomiye ku xigeenka Onursal Adıgüzel, Yunus Emre iyo Aykut Erdoğdu; Wuxuu sidoo kale kulan la qaatay Engin Altay, gudoomiye ku xigeenka CHP Group ee baarlamaanka, iyo wakiilo ka socda magaalada Istanbul ee xisbiga. Xoghayaha guud ee BBB Yavuz Erkut iyo İBB Assembly CHP Madaxweyne kuxigeenka Doğan Subaşı ayaa iyaguna ka soo qeybgalay kulanka. Isaga oo ka hadlayey munaasabadda xalay lagu qabtay magaalada Ortaköy, İmamoğlu wuxuu taxay ujeedkiisa ah la xisaabtanka 6,5-7 bilood ee la soo dhaafay falalka, isagoo ka hadlay arrimaha hada taagan iyo la wadaagaya adeegyadooda.
"WUXU UU YAHAY GUDBINTA BILAASH AH MAY 1"
Isagoo leh, "Waxaan isku dayeynaa inaan la shaqeyno asxaabteena si aan u maareyno IMF, oo leh hannaan dimoqraadi ah oo tusaale u noqon kara, ka fog daahfurnaanta", İmamoğlu wuxuu bixiyay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan “miiska IMM” ay la kulmeen markii ay la wareegeen maamulka. Imamoglu wuxuu kaloo ogeysiiyay kuxigeenada barxadda Istaanbuul, jidadka metrooga ee istaagay oo billowday, gaadiid 24-saac ah, la-dagaallanka saboolnimada magaalooyinka, qiimo dhimis dhanka gaadiidka ah oo ardayda loo sameeyo, 3 kun 300 oo tababbar TL ah sanadkii, xannaanada ilaa 150 xaafad, dhaqanka dadka ee Istanbul. Isagoo xusuusinaya inay xor u ahayd helitaanka xilliyada ciidaha diiniga ah oo kaliya Istanbul xilliyadii la soo dhaafay, ayuu yiri İmamoğlu, “Waxaan sidoo kale ku darnay fasaxyada qaranka iyo ciidaha dadweynaha. Waxaan bixinay gaadiid bilaash ah bilowga sanadka, Oktoobar 29 iyo Agoosto 30. Maaddaama ay tahay maalin rasmi ah oo ah Maajo 1, Maalinta Shaqaalaha, gaadiidku xor ayay noqon doonaan ”.
“XIRFADUHU UU XIDHAN”
Imamoglu wuxuu kaloo yiri xigta "cemevi", oo ka mid ah mowduucyada ugu hadalheynta badan:
Waxaan u soo qaadnay geedi socodka tirinta qabyaalada goobaha cibaadada baarlamaanka. Marka tan la eego, AK Party iyo kooxda MHP waxay ku adkaysanayaan inay go'aan ka gaadhaan sidii ay u buuxin lahaayeen baahiyahooda, intii ay tirin lahaayeen goobaha cibaadada. Waxaan tan ka shaqeynayay 2-3 bilood. Waxaan ku adkaysanay in aan tan la imaado saxiix wadajirka ah oo ka kooban 4 xisbi anagoo talo soo jeedinna u samaynay kooxda kulanka. Nasiib darrose, markii aynaan saxeexin dahab, waxaan siinnay Xisbiga Wanaagsan. Kadibna waxay filaayeen ka saarista guddiga inay tahay 'caawimaad'; laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhawaaqo in aan dib ugu soo celiyo baarlamaanka arintan waxaanan ku adkaysanayaa in markale lahadlo. Mawduuca ma xirna. ”
“QAYBAHA AANU MUDNEYAHAY IN AAN ISBITAALKA KA SOO JEEDINNO, Awoodda AADAN, CHANNEL MADAXWEYNE ISTANBUL”
Isagoo sharaxaya aragtidiisa iyo adeegyadiisa mowduucyada sida "Green Istanbul", "kaqeybgalka dimuqraadiyadda", İmamoğlu wuxuu tusaale u soo qaatay muhiimadda aqoon isweydaarsiga ay soo qaban qaabisay İBB ee ku saabsan dhibaatada phaeton ee Adalar. Imamoglu wuxuu yidhi, "Tusaale ahaan, arrinta Jasiiradaha; Aqoon-isweydaarsiga ayaa ka soo gaadhay halkaan markii lagu jiray kulammada. Waxaan dhihi karaa kumanaan kun oo kaqeybgal ah oo aan ku muujiney jasiiradaha ma tusin awooda hada jirta ee Kanal Istanbul. Waxaan aad uga taxadaraa wadahadalka muwaadin ee aan abuurnay, xitaa arimaha yar ee aad aragto. Waxaan ka qabanay aqoon isweydaarsiyo maadooyin badan ah. Kuwa ugu muhiimsan ayaa ahaa aqoon isweydaarsiga Kanal Istanbul. Waxaan sameynay Aqoon-isweydaarsiga Biyaha marka lagu daro tan. Saamaynta ayaa aad u kacsanayd. Wuxuu hubiyay saynisyahanada inay si geesinimo leh uga qeybqaataan howsha, waa aqoon isweydaarsiyo. ”
"Waxaan bilownay Qorshe Feejignaan Gaadhsiyo Dhulka"
İmamoğlu, oo furay khudbad gaar ah oo ku saabsan dhulgariir khudbadiisa ayaa yiri: “Arrinta dhulgariirku waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan u nimid shaqada isla markii aan nimid. Waxaan bilownay 'Qorshaha Dhaqdhaqaaqa Dhulgariirka' waxaanan ugu gudbinay 39 degmo. Waxaan ku qabanay 'Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka' ee Xarunta Golaha Kongareeska ee Istanbul muddo 2 maalmood ah. Waxaan kuu soo diri doonaa warbixinada qoran ee dhammaan aqoon isweydaarsiga dhamaantiin bisha Febraayo. Aqoon isweydaarsigan, waxaan isweydaarsanay aragtiyo gaaraya 200 kun oo qof. 174 hay'adood oo kala duwan ayaa ka soo qaybgalay. Natiijo ahaan, waxaan abuurnay 'Dhulgariirka Dhul-gariirka' tan gudaheedna, 'Golaha Dhul-gariirka' ayaa la soo saaray. Waxaan qeexnay iskaashi ku saabsan jawiga ka dhici doona qatarta dhulgariirka ee Istanbul iyo tillaabooyinka la qaadayo. Waxaan sidoo kale hubinaynaa in mas'uuliyadda ay noqotay mid baahsan. Tan, waxaan xaqiijinaynaa jiritaanka hay'ado badan. ”
DAAWEYNTA DHAQANKA EE SIYAASADDA SIYAASADDA AADAN… .. ”
- Waa muhiim in degmadu tahay udub dhexaadka arrimaha noocan ah. Laakiin ficillada xiisaha leh ee gobolka sida ficillada qaarkood, qaadashada AFAD ee Istanbul ka dhanka ah AKOM dhinac kale, dariiqyada xafiisyada ee halkaas kama shaqeeyaan si hufan oo fikradayda ah, waxay u dhaqmaan sidii inay tahay arin siyaasadeed, oo aan lagu casuumin inay kaqaybqaataan qorshayaashayada qaarkood. in aad qaadatay. Laakiin waxaan danaynaynaa arrintan. Waxaan dhaqaajinaa dalabkeena mobilada. Waxaan hadda ka shaqeynaynaa falanqaynta xaaladda hadda jirta ee saamiga isbadalka magaalooyinka. 50 dhismeyaal tijaabo ah, waxaan isku daynaa dalabyo kala duwan. Halkan, T bothBİTAK iyo İTÜ labaduba waxay leeyihiin shaqo. Urur Jarmal ah ayaa leh soo jeedin. Samaynta shaqada waa muhiim. Waxaan isku dayeynaa inaan ka abuurno alaabada dhismaha ee Istanbul halkan. Aynu nidhaahno waxaan bulshada ku wargalin doonaa warbixinno kumeel gaar ah, waxaan marka hore tababaridoonnaa ilaa 100 kun oo shaqaale IMM ah, waana la qabsan doonnaa howshan. ”
"IN KA BADAN WARBIXIN KU SAABSAN MID KA MID AH 'ARE' DIRE '' AREAS '
Mustaqbalka dhow, waxaan furi doonnaa laba goobood oo waaweyn oo lagu kulmo iyo baagag waxbarasho. Sidoo kale, aan xusno in aan la wadaagi doonno aagagga kulanka ee Istanbul si dhab ah iyo codsiyo, oo waxaan mustaqbalka la wadaagi doonnaa Istanbul. Waxaan shaaciyey inaanan waligeen ka bixi doonin ajandaha guud anagoo raacaynayna dhammaan waxyaabihii ugu dambeeyay uguna dambeeyay. Waxaan kala shaqeynaa guddi lataliye dhanka isbadalka magaalooyinka. Nasiib darrose, waxaa jira aagag 'la ceyriyay', sida loo hadlo, ee ku sii socda isbadalka magaalooyinka. Waxaan isku dayaynaa inaan dayactirno. Dhinac, dhismayaasha ayaa la dhammeystirey, dhanka kale, waxaa jira dad u baahan inay guuraan. Laakiin waxaan wajahaynaa dhibaatooyin iyo bulsho kacsanaan soo jirtay 2-1 sano. Nasiib darrose, moodalka isbeddelka magaalada ee maskaxda lagu soo qaaday waa mid aad u xun. Kuwani waxay leeyihiin arrimo ay waajib tahay in sharciga lagu habeeyo. Isbedelka magaalada waa ganacsi muhiim inoo ah. Taas waan ka warqabnaa. Waxaan rajeyneynaa, inaan soo bandhigi doono oo aan kula shaqeyn doonno sannadka 2, qaabkooda la taaban karo, ee arrintan la xiriira. Waxaan muujin doonaa sida aan u tanaasulno. ”
XAALADAHA DADWEYNAHA EE XAARAA: “HADAADKA CIIDAMADA CHANELKA WAA IN AY WAQTI WAA BADAN 56AN”
İmamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay inay 2020 bilyan oo maalgashi ka samayn doonaan magaalada Istanbul sanadka 10 wuxuuna yiri, “Waxaad arki doontaa 10 maalgashi oo cusub bil kasta bilwalba. Sanadka 2020, waxaan furi doonaa inka badan 100 maalgashi, marka laga reebo xanaanooyinkayada. Waxaan diyaarinaynaa wax soo saar badan 2020 sano. Wax kastoo ay sameeyaan, awood uma yeelan doonaan inay naga hortagaan. Waxaan arkaa inaan helno taageerada dadweynaha. Baaritaannadeenna, waxaan ku aragnay in taageerada naloo siiyo ay barbar socoto. tus Waxaan cabbirnay sida mowqifka ka dhanka ah Kanal Istanbul uu isu beddelay. Markii arinka la saaray ajandaha ugu horeeya, markii aan nidhi 'Waan damacsanahay', waxaa jiray heerar taageero ah oo ah 56-57 boqolkiiba, taasi waa, heerka togan ee wasiir. Tani hadda waa laga noqday. Qiyaastii boqolkiiba 56-57 ayaa isu beddelay muwaadin diidmo ah. Xaqiiqdii, waxaan u maleynaynaa inay ka badan tahay 60 boqolkiiba maalmahan. Sahamada isweydaarsiga ee ay sameeyeen labada xarumood iyo annaga, waxaan ku aragnaa in aragtida wanaagsan ay sii socoto ama xitaa ay sii koreyso oo ay qaateen dadka reer Istanbul. Mid kasta oo ka mid ah kuwan waxay ina kiciyaan xitaa waxbadan. Waxay na dareensiisaa inaan wax badan qabanno. Waxaan rajeyneynaa inaan noqon doonno dowlad xiiseyneysa dhamaan arrimaha magaaladan quduuska ah una halgameysa xalka. ”
ALSTOM 2011 / 2012 ayaa ku dhawaaqday natiijooyinka sanadka, amarrada ay kordheen 14 boqolkiiba
Shaqooyinka Vyksa Steel waxay ku dhawaaqayaan natiijooyinka wax soo saarka labadii bilood ee ugu horreeyay sanadka
Shirkadda Gaadiidka TCDD KPSS waxay ku dhawaaqday natiijooyinka 2017 / 2
1-da May Maalinta Shaqaalaha
Gaadiidku xor ma yahay Maajo 1deeda
Golaha Dhulgariirka Istanbul
Qorshaha abaabulka dhulgariirka Istanbul
Goobta shirarka dhul gariirka Istanbul
Dhibaatada gaari wadidda jasiiradaha
Natiijooyinka Sahaminta Kanal Istanbul